यो मेरो जिन्दगी हो, यतिसम्म कि म अमेरिकामा सवारी गर्दापनी हेल्मेट लगाउन्न: पारश शाह । विवादपछि पहिलोपटक मुख खोले । - खबरदार न्युज
यो मेरो जिन्दगी हो यतिसम्म कि मैले अमेरिकामा सवारी चलाउदा पनि हेल्मेट लगाउदैन: पारश शाहले प्रहरिले छोडे लगत्तै फेसबुकमा लेखे।
काठमाडौँको बीच सडकमा पूर्व युवराज पारस शाहले शुक्रबार साँझ ट्राफिक प्रहरीसँग वि’वाद गरेका छन् । शाहसहित केहि व्यक्तिले हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाइरहेको देखेपछि महाराजगंज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिकले उनिहरुलाई रोकेका थिए। ट्राफिकले रोकेपछि उनिसंगै रहेका केहिले गल्ति स्वीकार गरेपनि पारस शाह भने झग’डामै उत्रिएका हुन् ।
पारसको यस्तो हर्कत देखेर प्रत्यक्षदर्शीले यहाँ सर्वसाधारण भएको भए पुलिसले गाडीमा हालेर लागिसक्थ्यो भनेका छन् उनले यसो भनिरहदा परासले निकै आ-क्र’मक शैलीमा औला उठाउदै छोड, छोड भनेका छन्। त्यसबीचमा पारससँगै आएका उनका समर्थकले हल्ला गरेको देखिन्छ।
बीच सडकमा बाटोमा सर्वसाधारणको भिड बढ्ने र अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने देखिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। र गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेपछि पारस र उनका समर्थकलाई छाडिएको छ ।
तर ट्राफिक नियम उल्ल‌ंघन गरेका कारण उनीहरुमाथि कानुनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
Previous post पक्राउ परेका पारस शाह प्रहरी चौकी नपुग्दै बिच बाटो बाटै छुटे: माथिको आदेश भन्दै छोडियो…कसले छुटायो त यो हेर्नुस।
Next post भारतिय सेनाको दादागिरी : बिच नदिमा पुगेको तुइन का’टेर नेपालीको ह’त्या तर सरकार मौन ! सेयर गर्नुहोला…
Previous post:पक्राउ परेका पारस शाह प्रहरी चौकी नपुग्दै बिच बाटो बाटै छुटे: माथिको आदेश भन्दै छोडियो…कसले छुटायो त यो हेर्नुस।
Next post:भारतिय सेनाको दादागिरी : बिच नदिमा पुगेको तुइन का’टेर नेपालीको ह’त्या तर सरकार मौन ! सेयर गर्नुहोला…